EMUI 10: ahoana no fomba maizina amin'ny telefaona Huawei | Androidsis
Ny farany fanavaozana ny Android 10 Izy io dia nitondra vaovao tsy mampino ao amin'ireo sehatra manan-danja indrindra, toy ny fiarovana. Na dia ny iray amin'ireo mampiavaka azy vaovao aza dia mamela anao hitahiry bateria amin'ilay antsoina hoe maody maizina. ny Telefaona Huawei izay manana EMUI 10 Efa azon'izy ireo atao ny mampihetsika ity asa ity, na dia mbola tsy nohavaozina aza ny terminal anao dia manana fomba hafa ianao.
Ity fironana ity dia misy fiantraikany betsaka kokoa noho ny rafitra miasa sy ny menus fitetezana azy. Ary ankehitriny, dia tsy fahita firy ny mahita rindranasa izay tsy manana ilay Maody maizina, toa ny WhatsApp na Facebook. Efa maro ireo mpampiasa nampitandrina fa nahatsikaritra fiovana eo amin'ny fiainany bateria, izay nolazain'izy ireo fa nitombo.
Mora tokoa ny mampandeha ny maody maizina amin'ny EMUI 10
Na dia miasa mandreraka aza i Huawei hanavao ireo terminal ao aminy EMUI 10, izay mifototra amin'ny Android 10, betsaka ny somary antitra mbola tsy nahazo ity fanavaozana ity. Ho an'ireo izay mbola tsy afaka mampihetsika ny maody maizimaizina, mahafantatra fa misy fomba iray hanatrarana azy, ampandehanana fotsiny ny lohahevitra namboarina, izay hanova ny fampiasa ao amin'ny finday avo lenta, mba hahazoana azy ao amin'ny maody maizina.
Raha te hahafantatra ianao raha mifanaraka amin'ny fitaovanao ity maody maizina ity dia tokony ho fantatrao fa mifanentana amin'ireo finday Huawei sy Honor avy amin'ny andiany 5.0 an'ny Emui, hatramin'ny 9.1. Noho izany, Huawei P10, Mate 8, Huawei P8 ary ireo antitra hafa dia tsy hankafy izany mety izany.
Ho an'ireo afaka miditra amin'ity safidy maody maizina ity dia tsy maintsy mametraka amin'ny findainy izy ireo EMUI 10 Theme mainty, azo jerena ao amin'ny Google Play. Vantany vao manokatra ity rindrambaiko ity ianao dia hahita safidy roa, ny voalohany dia ho an'ny finday avo lenta izay miasa amin'ny EMUI 5/8/9. Ary ny faharoa, dia tsy maintsy nofidian'ireo fitaovana efa novaina ho EMUI 9.1.
Raha te hampihatra an'ity lohahevitra ity dia hahita hafatra izay hilaza aminao ianao fa tokony ho any amin'ny talen'ny lohahevitra amin'ny telefaona findainao, hiditra amin'ny Fikirakirana ary hisafidy ny "EMUI 10 Dark Theme". Raha vantany vao nanamarika azy ianao, ny loko finday dia handray loko mainty, ary hanana ny fahatsapana ho ao anaty kinova avo kokoa amin'ny rafitra ianao. Na dia maimaimpoana tanteraka aza ity fampiharana ity, raha te handray anjara amin'ny fikojakojana azy ireo dia azonao atao ny mampandeha ny kinova Premium, izay mitentina 0,89 euro ny vola, ary mamafa ny doka. Farany, aza adino ny mampandeha azy amin'ny fampiharana izay manohana an'ity maody ity ho an'ny traikefa tsara kokoa.
Dark Emui-10 Lohahevitra ho an'ny Huawei
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ahoana ny fananana maody maizina amin'ny Huawei tsy misy EMUI 10!